मिर्लुङको मेलोडी :: Press Chautari ::
अग्रज गीतकारको नाम झट्टै लिनुपर्दा कसको नाम आउँछ ? चर्चित युवा गीतकार वसन्तवित्यासी थापालाई मैले सोधेँ । उनको सहज जवाफ थियो दिनेश अधिकारी । मैले यस्तो प्रश्न गर्छु भन्ने उनले सोचेका थिएनन् होला सायद ! मेरो पनि कुनै योजना थिएन उनलाई कुमाई जालमा पार्ने । यो उत्तर नै काफी भयो मलाई । एउटा इमान्दार युवा गीतकारमा हुनुपर्ने कुरा यही नै हो । अनि यही हुनुपर्छ । आज अर्थात् समकालीन याम इमानदार छैन । अहँ पटक्कै विश्वासिलो छैन । छ भने पनि भय, त्रासदी वा आशङ्काको बाक्लो तुवाँलो छ ।
उनीसँग रहेको निश्चल जवाफ भेटेपछि म गम्भीर हुन पुगेँ । उनको अनेष्ट–आन्सरले मलाई निक्कैबेर रन्थनायो । म छिप्पिएको छनुवाको डबके–डुबुल्कीमा परेझैँ भएँ । उनको इमान्दार उत्तरसँग केही क्षण रुमलिएँ र फरि गीतकारतर्फ मोडिएँ । मैले उनको अनुहार हेरी टोपलेँ । गोरो वर्णमा ठूलो टाउकोसँगै चिम्सा आँखाहरु क्या मुस्काइरहेका थिए । कान्तियुक्त ललाटमा मैले उनका रचनाका आकृतिहरु पढिरहेँ.....पढिरहेँ.....। यस्तो अनुभूति मेरा लागि पहिलो थियो । गीतको रुमानी लहरमा तैरिन चाहन्छु ।
पहिलो भेटको चिनाजानी भयो मीठो कुराकानी
नाचौं गाऔं रोदी घरमै जिन्दगी हो घामपानी ।
गीतको मूलमुठो लिएर आएका छन् वसन्तबित्यासी थापा । भेट्ने सल्लाह निक्कै अघिको हो । त्यो मध्यान्नको दोस्रो प्रहर जस्तो लाग्छ मलाई । अक्सर म वैशाखी–रापिला दिनहरुमा भुइँतल्लाको उत्तर–पूर्वी शितल बङकरभित्र केही अभिलेख गरिरहेको हुन्छु । या त गितार–हर्मोनियमाथि अलिक अघिदेखिका धुलोहरु म जत्तिकै पुराना मेरा औलाहरुले सुम्सुम्याइ रहेको हुन्छु । अथवा कुनै रागीन स्टुडियोमा धुन–ध्वनिहरुका संयोगमा हुन्छु । यो मेरो जीवनको उत्तराद्र्धको दैनिकी पनि हो । पैरिँदै गरेका पहाड जस्ता उमेरहरुलाई चटक्कै बिर्सेर घुम्ती–घुम्ती अनि कुन कुन माछीकाँडे भञ्ज्याङहरु नाघेर यहाँसम्म आएँ क्यारे । क्यारुम् मलाई नै थाहा छैन । यसरी म गीत–सङ्गीत र बुढ्यौलीमा पो निर्लिप्त भइसकेछु । नत्र युवा–गीतहरु लिएर किन आउँथे र बित्यासी ! नवीनतम गीतका पुलिन्दा मलाई बोकाएर उनी हिँडेपछि केही दिन म बिलखबन्दमा परेँ । मनको उल्झन कति बोझिलो हुने रैछ हौं ।
किन दियौं फूलको उपहार मलाई को ठानी
भएको छैन तिम्रो मेराबीच कुनै चिनाजानी ।
यो वसन्त मौसम, वैशाख अनि वसन्त आकर्षणको स्पर्श पनि खै कहिलेदेखिको हो मसँग । यकिन गरेर भन्न सक्दिनँ म । टाँसिरहेको छ टाँसिरहेको छ एकोहोरो दशकौँ अघिको जस्तै । तर यति हो यो याम वशन्त र बित्यासीहरुकै हो । वसन्तमा फुल्ने जाईजुही हुन् वा चाँपचिमल, यो ऋतु अनि परिवर्तन उनकै हो । अचम्मै लाग्छ, र लाग्दछन् फूलहरु रङ्गी–विरङ्गी, मान्छेका भाव अनि भावनाहरु पनि रङ्ग रङ्गका । भोगाई, लेखाई र लेखान्तमा पनि विविधता...। भाइ अंशबाट पाएको पाटो जस्तै दम्सैलो उकालो तथापि हार्दिक, मलिलो अनि माया लाग्दो । आरु, आरुबखडाका फूलहरु झैँ गीतकारका गीति फूलहरुलाई न जातका असिनापानीले चुट्न सक्छ, न त रातका अँध्याराले छोप्न र छिमल्न सक्छ । यस छिमलका सुन्दर सिर्जनाहरु हुर्किरहेका छन् वसन्त बनेर ।
तिमीलाई देखेर रमाउने नयनमा
बिरहको आँशु सिवाय बग्ने भएन
तिमीसँग हाँसेर खेल्ने आँगनमा
पीडा, छटपटी सिवाय रहने भएन ।
नेपाली समाजको सनातनी संरचनालाई उजागर गर्दै र केही किनारतर्फ आफल्दै प्रगतिशील–परिवर्तनशील सोचमा रचिएका गीतहरु मलाई मनपर्छन् । मानव विकासको प्रत्येक–पृथक चरण र सभ्यतालाई परख नगर्ने हो भने न गीत रच्न सकिन्छ न गाउन नै । गीतको शुक्ष्म–श्रुति अनुभूति नगर्नेले गीतको रचनामा कलात्मकता देखाउन सक्दैन । न त गीतको मार्मिकता नै प्रस्तुत गर्न सक्छ । गीतको सिर्जनशील विकासमा परम्परा भत्किएन भने वा जडसूत्रवादीको सिलोटमा कोरिएको धुलौटे गीतले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसले त गीति–विकासको मूलबाटो बन्द गरिदिन्छ वा परम्परा मात्र थामिखान्छ । नवगीति–फूलका आशातीत बगैचाहरु ध्वस्त पारिदिन्छ । गीतका कोपिला, मुना र पत्रपत्रहरु लाहीले जस्तो नष्ट पारिदिन्छ । त्यो बिग्रहपथ हो । उतै लाग्ने हो भने त्यो अक्कर हो, डरलाग्दो भीर हो, अझ भनौं त्यो पूरातन जन्जिर हो । त्यहाँबाट फर्केर आफ्नै गीति–फँडानीमा फेरि उम्रिन सकिन्न । निजी खोरिया खन्न सकिन्न । गीति निजत्वको सन्दर्भ यहीँ जोडिन्छ ।
कहिले मायालाई दिनैले ढाँट्यो कहिले रातैले
कहिले मायालाई धर्मैले छेक्यो कहिले जातैले ।
हो ! माया जात, धर्म, कालो, गोरो, खैरे, पुत्ले वा पाङ्ग्रे घेराभित्र कहिल्यै फैलिन सक्दैन । त्यसैगरी गीत पनि । न त जातजाति र धर्मको सिकन्जाले नै मायालाई बाँध्न सक्दछ । त्यसैले गीत स्वतन्त्र मुटुको एकाकार महक हो । स्वछन्द अनि सुमधुर सुवास हो । मनोहर, महक अनि सुवासलाई हिजोका विभेदको फरिकोले छेक्न सक्दैन । हिजो जो भोगियो भोलि त्यो हुन्न । त्यसले बाटो बदल्छ बदल्छ । बगी रहने नदीले पनि किनारहरु फेर्दै जान्छ । अब गीत–सङ्गीतका बन्धन, जालझेल र जन्जिरहरु तोडिन्छन् । त्यो उन्मुक्तिको अन्वेषणको आरम्भ यहाँ भइसकेका छ । गीतको वसन्त लागिसकेको छ ।
हिजोको सिङ्गो आकाश र धरती आज च्यातिएको आकाश र कित्ताकाट भएको जमिनमा रूपान्तरित छ । आजको गीत नियाल्न यी दृष्टि खोलिनै पर्ने भएको छ ।
नजरको दोषी बनी किन झुल्किन्छौ नयनमा ए साइँला
वेदना खापी कति दिन किन तड्पाउँछौ मनमा ए साइँला ।
गीतकारले उक्लिरहेको गीति–मिर्लुङ चुचुरो यतै आडैमा छ ब्यारे । होनीमाया, यानीमाया, सान्नानी अनि सालैजो, ठाडी जस्ता भेगीय भाकाका गीति–भेडीगोठ दमौलीको दम्सैलो पाखामा अझै खर्की रहेका छन् । सेती र मादीको प्राच्य भौगोलिक मिलन रचनाका अवयवहरुमा प्रष्टिएका छन् । यी गीतका प्रेमिल प्रतीक अनि बिम्बहरु गीतको बन्दीपुरमाथि उक्लेर विमलटारतिरै किन हो बेग मारिरहेका छन् । मायाको मेसो पाएपछि बैँसले बेग हानिहाल्छ क्यारे । उबेला हामीले पनि रोँधीघरमा खुट्टाको हिलो नपखालेको कहाँ हो र । कुसुन्डो भएर घाटुमा मुन्टो कहाँ नलर्काएको हो र ।
तनहुँ भन्दाभन्दै पनि प्रसस्तै स्रष्टाहरु भएको र जन्मेको आदिभूमि हो यो, वस्तुगत यथार्थ पनि हो । आफ्नोपनको बलियो गीति–घडेरी खनिएको छ ओठभरि सुसेलिएका गीतहरुमा । अगुवा आचार्य–अधिकारी आदिका आ–आफ्नै विशाल भग्न–दरबारहरु छन् गीतका । तथापि आफैले शिखराशैलीको शिला कुँद्नु गीतकार वित्यासीको विशेषता बनेको छ । गीत लेख्नु एक सचेतता नै हो । म गीतकार थापाका गीति–चेतनामा यही देखिरहेको छु, एक सङ्गीतकर्मी हुनुको नाताले । यो एउटा गीतको मिर्लुङ हो, गीतको मेलोडी पनि हो । बस् यति ल ।
बुधवार, २०७० आश्विन ०२ गते २२:५८ / Wednesday, Sep 18, 2013 10:58 pm